Everex partners with Myanmar’s Shwe Bank to Provide Migrants with Blockchain-Based Remittance Services - Worldnews.com
On July 31, 2018, Everex and Myanmar’s Shwe Bank announcedapartnership to provideablockchain-based solution to migrants. The deal will pave the way for the introduction ofablockchain-based remittance service that will allow migrants from Myanmar and Thailand to access cheaper remittance services. Remittance Market Overhaul
မြန်မာဇာတ်ကား-ရေနဲ့ဝေးတဲ့ရွှေကြာ-ဖြိုးငွေစိုး၊ ရဲအောင်၊ ဂန္တဝင်
May Ka Byar, Nay Htoo Naing - MYANMAR NEW MOVIES 2018 P-2
May Ka Byar, Nay Htoo Naing - MYANMAR NEW MOVIES 2018 P-1
မြန်မာဇာတ်ကား-နှစ်ယောက်စလုံးကိုချစ်တယ်-မြင့်မြတ်၊ ယုသန္တာတင်၊ သွန်းဆက်
পুনর্বাসন নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোয় ভাসানচরে যেতে রাজি নয় রোহিঙ্গারা | Myanmar News | Somoy TV
မြန်မာဇာတ်ကား-သံယောဇဉ်နှောင်ကြိုး-ကျော်သူ၊ ရဲအောင်၊မေသန်းနု၊ မေသဉ္ဇာဦး၊ သိင်္ဂီထွန်း
Episode7| Judges' Houses | The XFactor Myanmar 2018
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCN သတင်းဌာနက စီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ “ကမ္ဘာ့သတင်းတွေထဲက မြန်မာ” အစီအစဉ်က ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့ ကမ္ဘာ့သတင်းမီဒီယာအသီးသီးမှာ ဖော်ပြနေကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သတင်းတွေထဲက ထိပ်တန်းရောက်သတင်းတွေကို ထုတ်နှုတ် တင်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။...
Plz.. Subscribe to see more.......
------------------------------------------------ Please subscribe to The XFactor Myanmar channel for more videos to come ► http://bit.ly/XfactorMyanmar_YT Facebook: https://www.facebook.com/xfactormyanmar...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCN သတင်းဌာနက စီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ “ကမ္ဘာ့သတင်းတွေထဲက မြန်မာ” အစီအစဉ်က ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့ ကမ္ဘာ့သတင်းမီဒီယာအသီးသီးမှာ ဖော်ပြနေကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သတင်းတွေထဲက ထိပ်တန်းရောက်သတင်းတွေကို ထုတ်နှုတ် တင်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Plz.. Subscribe to see more....
------------------------------------------------ Please subscribe to The XFactor Myanmar channel for more videos to come ► http://bit.ly/XfactorMyanmar_YT Facebook: https://www.facebook.com/xfactormyanmar